[Tribune] G7: Ma jiri doono kacdoon waara oo aan dheddig-labood lahayn - JeuneAfrique.com - KU SAMEE
ACCUEIL » COMPANY »[Tribune] G7: Ma jiri doono kacdoon waara oo aan dheddig-labo lahayn - JeuneAfrique.com
Maalmo ka hor shirweynihii G7 ee ka dhacay Faransiiska, dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa reer Tunisiya Aya Chebbi waxay hoosta ka xariiqday fursadda uu kulankani matalayo si wax looga qabto sinaan la'aanta jinsiga, gaar ahaan heerka sharci dejinta, waana ku mahadsan tahay ka qeybgalka aan horay loo arag ee hogaamiyaasha Wadamada Afrika.
Ku dhawaad ​​toban sano ayaa ka soo wareegatay bilowgii wixii aan ugu magacdarnay kacaankii sharafta, oo ay uqalmayaan dad badan oo ah "Arab Spring". Waxaan ka mid ahaa. Waan xanaaqnay, waxaan weydiisanay mustaqbal aan ku xaqiijino riyadeena. Halgankayagu wuxuu sidoo kale ahaa halgan si codkeena loo maqlo maxaa yeelay fikradaheenna iyo rajadayadu kama soo dhex muuqan dawladeena. In kasta oo mudaaharaadyadu ay ka kala gudbeen waddan ilaa waddan kale isla markaana ay heleen natiijooyin kaladuwan, shaki kuma jiro: dhallinyardu way beddeleen taariikhda taariikhda.
Dumar badan oo da 'yar ayaa safka hore kaga jira dhaqdhaqaaqan. Ku lug lahaanshahooda ayaa dhaaftay ka qeybgalkooda dhacdooyinka. Ha ahaato abaabulayaal, suxufiyiin ama u ololeeya siyaasadeed, haweenka da'da yar waxay noqdeen hoggaamiyeyaal dhaqdhaqaaqa internetka. Kahor intaanan noqon kaaliyaha midowga Afrika ee dhalinyarada, waxaan ka mid ahaa haweenkaas. Waxaan ka faa'iideysanay xilligan si codkayaga looga dhigo adduunka intiisa kale.
Qaado xaaladda Suudaan xilligan: waddanku wuxuu ka takhalusaa labaatankii sano ee kaligii taliska ahaa. Haweenka intiisa badani waxay ku baaqeen kacdoon nabdoon oo lagaga soo horjeedo ciidanka milatariga. Tani maahan dhacdo. Haweenku waxay leeyihiin sabab kasta oo ay cod ugu dhawaaqaan oo ay ugu sheegtaan waxa iyaga ku jira. Wali ma lihin xuquuq isku mid ah, kana fog.
Inta badan waddamada adduunka xitaa waxay xaddidaan fursadaha dhaqaale ee haweenka xitaa sharciyadooda. In ka badan waddamada 100 xitaa waxay u socdaan sidii ay u mamnuuceen haweenka inay u helaan xirfado gaar ah, waxaana jira 18 waddan oo raggu ay sharci ahaan ka hor istaagi karaan haweenkooda inay shaqeeyaan. Haweenka iyo gabdhaha ayaa ah kuwa ugu dhibka badan ee ku dhaca sinaan la'aanta ka jirta wadamada ugu saboolsan. Isku soo wada duuboo, saboolnimadu waa jinsi. Marka sida muuqata haweenku dariiqa ayey u socdaan. Ma jiri doono kacaan waara oo aan dheddig-labood lahayn.
Heerka hadda jira ee ay wax ku socdaan, waxay qaadan doontaa celcelis ahaan sannadihii kale ee 108 ka hor inta aan la gaadhin sinnaanta jinsiga ee adduunka
Maaha in doodda sharciga ahi aysan ahayn sabab kufilan, laakiin maahan oo keliya in la isweydiiyo caddaaladda. Waa wax aan caqli gal ahayn in laga tago kala bar dadka haddiiba uu rabo inuu arko bulsho samafal ah. Gabdhaha iyo haweenka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu joojiyo saboolnimada ba'an, mar iyo dhammaan.
Heerka hadda socda ee horumarka, waxay qaadaneysaa celcelis ahaan sanado kale oo ah 108 sano kahor intaanan gaarin sinnaanta jinsiga ee adduunka. Maxaa inaga hortaagan inaan badalno ciyaarta haweenka iyo gabdhaha? Nasiib darrose, shaqooyinka siyaasada ayaa si tartiib tartiib ah isu badalaya.
Erayo iyo camal
Mararka qaarkood kiciyaha ayaa loo baahan yahay si waxyaabaha u bilaabaan inay si fiican u beddelaan. Tani waxay dhici kartaa isbuucaan goorta Emmanuel Macron waxay ku soo dhaweyn doontaa dhiggeeda shirka G7 ee Biarritz. Madaxweynaha Faransiiska wuxuu dhigay dagaalka ka dhanka ah sinaan la'aanta ajendaha ajandaha shirka - isagoo diiradda saaraya sinnaanta jinsiga.
Haddii aan eegno hadalada hadalka ee ay adeegsadeen hoggaamiyeyaashu waagii hore, waxaa suuragal ah inaan lahaanno aragti ah in sinnaanta xuquuqda haweenka iyo ragga ay tahay meel la gaari karo. Waxay sii wadaan inay adkeeyaan muhiimadda ay leedahay in la wanaajiyo xaaladda haweenka iyo gabdhaha. Laakiin kuwanu badanaa waa ereyo qurux badan. Hadalkuna kuma filna. Waa falalka tirinta. Waa inaan dhamaanteen dalbanaa horumar dhab ah, balanqaadyo fudud oo fudud.
Isaga oo aan sheegin in shirku aanu waxba ka beddeli doonin wejiga adduunka il-qabatinka indhaha. Laakiin waxay noqon kartaa dhagaxii ugu horreeyay ee dhismaha weyn oo sinnaanta u dhexeeya haweenka iyo ragga ay ku nasan doonaan. Markii ugu horeysay, G7 kaliya kuma casuumin hogaamiyaasha Afrika sawirka qoyska dhaqameed iyo dhowr is gacan qaad, laakiin dhab ahaantii waxay ku lug lahaayeen geedi socodka gorgortanka. Tani waa sheeko gebi ahaanba cusub iyo fursad weyn oo lagu bilaabo wadahadal furan oo lagu dhiirigaliyo muwaadiniinta inay la xisaabtamaan dawladooda.
Go'aan qaadasho G7
Haddii hoggaamiyeyaashu ay si dhab ah uga go'an tahay inay horumariyaan sinnaanta jinsiga, waa inay ballan ku qaadaan inay miiska saaraan, baabi'iyaan shuruucda ku saleysan jinsiga iyo qaataan siyaasadaha horumarka, laakiin sidoo kale in la sameeyo hanaan cusub oo lagula soconayo isla markaana lagula xisaabtamo dhammaan ballanqaadyada sinnaanta ee dheddig-laboodka
Shirka Biarritz wuxuu go'aansan doonaa mustaqbalka G7. Taariikh ahaan, sharci ahaantiisa waxay ku saleysan tahay iskaashi caalami ah, go'aanno wada jir ah iyo bilowga howlaha caalamiga ah. Sannadkan, hoggaamiyeyaashu waa inay la yimaadaan horumar, ee aan loo ballan qaadin xuquuqda haweenka. Ma sugi doonno sanadaha 108 dheeraad ah.
Magacaabista Paul Biya ee gorgortanka gelitaanka Enam (warqad)